कस्तो छ प्रियंका कार्कीले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो ? - Nepal Insider
Home/भिडियो/कस्तो छ प्रियंका कार्कीले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो ?
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको फिल्मी करियर अधोगतिमा छ । कुनै समयकी ‘नम्बर वान’ भनिने उनको अभिनयको अहिले कुनै जोड र जादु चलेको छैन । त्यसैले उनी फिल्मबाट पाखा लाग्दैछिन् र म्युजिक भिडियोमा बढी छाउँदैछिन् ।केही समययता उनी धमाधम म्युजिक भिडियोमा देखिएकी छिन् ।
यसका साथ दिएका उनकै हुनेवाला श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीले । यो जोडी फिल्ममा खासै नचलेपछि म्युजिक भिडियोमा तानिएका हुन् ।अहिले भने प्रियंकाले निर्देशनतर्फ हात बढाएकी छिन्, म्युजिक भिडियोमा । उनले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ । अभिनयमा लामो समय गुजारेकी पि्रयंकाको पहिलो अनुभव हो, म्युजिक भिडियो निर्देशन ।
बाल गायिका आष्युका खनियाँको गीतलाई उनले दृश्यमा उतारेकी हुन् । गीतको बोल छ, मेरै लाहुरेले ।म्युजिक भिडियोमा प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको जोडीलाई देख्न सकिन्छ । लेखु सहयात्रीको शब्द रहेको गीतमा दीपक शर्माको संगीत रहेको छ । बाल गायिका आयुष्का खनियाँको स्वर रहेको गीतमानरेन्द्र बियोगीले संगीत संयोजन गरेका छन् ।कस्तो छ त अभिनेत्री प्रियंकाले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो ?
करिष्मा मानन्धर र शंकर बिसीको अभिनयमा ” लाम माया छपक्कै” ( भिडियो सहित)
युके पठाई दिन्छु भन्दै लाखौ रुपैया ठगीए पछि यी ६ जना बाल बच्चाकी आमा रुदै मिडियामा (पुरा भिडियो)
दीपक दीपाको ‘छ माया छपक्कै’ ट्रेलर सार्वजनिक [भिडियो ]
मेलिना राईको स्वरमा “के साह्रो मिठो कुवाको पानि” (भिडियो सहित)